ပွင့်လင်းရဲရင့်သူတွေရဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ၄ ချက် – Gentleman Magazine
ပွင့်လင်းရဲရင့်သူတွေရဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ၄ ချက်
မိန်းကလေးတွေက လက်တွဲဖော်ကို ဘယ်လိုရွေးတယ်ဆိုတာ သိပါသလား။ တခြားသူတွေ မဝံ့မရဲ ဖြစ်နေတုန်း သင်က ကိုယ့်ဘာသာ ယုံကြည်မှုရှိပြီး ပွင့်လင်းနေရင် လူကြားထဲမှာ ထင်ရှားနေပါလိမ့်မယ်။ မိန်းမပျိုတွေအတွက် စိတ်အနှောက်အယှက် အဖြစ်ဆုံးကတော့ မပွင့်လင်းတဲ့ မဝံ့မရဲဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာ ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့ ယောက်ျားတွေပါ။ အဲလို ယောက်ျားတွေက ချစ်ဇာတ်လမ်းကို ပျော်စရာကနေ စိတ်ညစ်စရာဖြစ်အောင် လုပ်ပစ်နိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေဟာ ပွင့်လင်းရဲရင့်တဲ့ ယောက်ျားမျိုးကို ကြိုက်ပါတယ်။ သူမချစ်သူမှာ ဦးတည်ချက် ရည်မှန်းချက် ရှိနေရင် သူမတို့ စိတ်သက်သာပါတယ်။ ပျော့ညံ့ညံ့ဆိုရင်တော့ နောက်တစ်ယောက်နောက် ပါသွားမှာပါ။
အမျိုးသမီးတွေက ပွင့်လင်းရဲရင့်တဲ့ ယောက်ျားတွေကို ကြိုက်ရတဲ့ အကြောင်း ၄ ချက် အောက်မှာ ပေးထားပါတယ်။ သင် ပွင့်လင်းရဲရင့်ချင်ရင်တော့ အဲဒိအချက်တွေကို လိုက်နာကြည့်ပါ။
၁. ပွင့်လင်းရဲရင့်သူတွေမှာ စိတ်ဖိစီးမှု မရှိပါဘူး
ချစ်ဇာတ်လမ်းဆိုတာ ပျော်စရာပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးစရာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ပျော့ညံညံသူတွေကို ဒိတ်လုပ်ရတာ ကြာလာတဲ့အမျှ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုဟာ မြင့်တက်လာပါတယ်။ ရဲရင့်သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ချစ်သူကို လုံခြုံစိတ်ချစေပါတယ်။ ချစ်ခြင်းမှာ လျှို့ဝှက်တာ မရှိသင့်ပါဘူး။ ရိုးရိုးသားသား ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ သင့်ချစ်သူကို ချစ်ပြလိုက်ပါ။
၂. ပွင့်လင်းရဲရင့်သူတွေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်စိတ် အရမ်းမြင့်ပါတယ်
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်သူတွေဟာ ဆွဲဆောင်မှု အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ပွင့်လင်းရဲရင့်ဖို့အတွက် ကိုယ့်ဘာသာ ယုံကြည်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒိ အချက်နှစ်ခုကို အမျိုးသမီးတွေ အရမ်း သဘောကျပါတယ်။ သဘာဝ ပီယဆေးတွေပါ။ အမျိုးသမီးတွေ လိုအပ်တာက ဥစ္စာရွှေငွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ယုံကြည်ချက်၊ အောင်မြင်မှု၊ ပွင့်လင်းမှုနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေပါ။ ယုံကြည်မှု ပြင်းထန်တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ သူချစ်တဲ့ အမျိုးသမီးအတွက် အနာဂါတ်အစီအစဉ်တွေ ချထားပါလိမ့်မယ်။
၃. ပွင့်လင်းရဲရင့်သူတွေဟာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အချိန်ကို အလဟသ မဖြုန်းပါဘူး
ပွင့်လင်းသူတွေဟာ တစ်ခေါက် နှစ်ခေါက် ချိန်းတွေ့အပြီးမှာ အချစ်ကို ခံစားမလာရဘူးဆို ရိုးရိုးသားသား ပြောပြတတ်ပါတယ်။ ချစ်တယ်ဆိုရင်လဲ ချစ်ကြောင်းကို ရဲရင့်စွာ ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ပျော့ညံသူတွေကျ ချစ်သလား မချစ်ဘူးလား ကိုယ့်ဘာသာ ဝေခွဲမရပဲ ဝေဝေဝါးဝါးနဲ့ အချိန်တွေ ဖြုန်းတီးတတ်ပါတယ်။ သင့်မှာ အဆင်မပြေတာ တစ်ခုခုရှိနေရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတာကို အမျိုးသမီးတွေ ကြိုက်ပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမရှိရင်တော့ သူတို့ကို တကယ်ကြိုက်တာ မဟုတ်ဖူးလို့ အမျိုးသမီးတွေ ထင်သွားကြပါလိမ့်မယ်။
၄. ပွင့်လင်းရဲရင့်သူတွေဟာ နှလုံးသားကို ချပြတတ်ကြပါတယ်
သူတို့ဟာ အငြင်းခံရမှာစိုးလို့ မပြောရဲတာမျိုး၊ အဟားခံရမှာစိုးလို့ လန့်ထွက်သွားတာမျိုး မရှိပါဘူး။ သူထင်တာ၊ သူခံစားရတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေ စိတ်ဖိစီးရတာဟာ သူတို့အတွဲ ဘာခံစားနေရလဲဆိုတာ မမှန်းတတ်လို့ပါ။ အဲဒါဟာ ပြသနာတွေရဲ့အစနဲ့ ချစ်ဇာတ်လမ်းရဲ့အဆုံး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်တွေကတော့ လျှို့ဝှက်ပြီး ရုပ်ရှင်ဆန်တဲ့ အချစ်မျိုးကို စိတ်ကူးယဉ်တတ်ကြမှာပါ။ အမျိုးသမီးတွေမှာတော့ အဲဒါမျိုးအတွက် အချိန်မရှိတော့ပါဘူး။ တစ်ခုခုခံစားနေရရင် ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေမယ့်အစား သူတို့ကို ပြောပြတာကို ပိုကြိုက်ကြပါတယ်။
ပှငျ့လငျးရဲရငျ့သူတှရေဲ့ ဆှဲဆောငျမှု ၄ ခကျြ
မိနျးကလေးတှကေ လကျတှဲဖျောကို ဘယျလိုရှေးတယျဆိုတာ သိပါသလား။ တခွားသူတှေ မဝံ့မရဲ ဖွဈနတေုနျး သငျက ကိုယျ့ဘာသာ ယုံကွညျမှုရှိပွီး ပှငျ့လငျးနရေငျ လူကွားထဲမှာ ထငျရှားနပေါလိမျ့မယျ။ မိနျးမပြိုတှအေတှကျ စိတျအနှောကျအယှကျ အဖွဈဆုံးကတော့ မပှငျ့လငျးတဲ့ မဝံ့မရဲဖွဈပွီး ကိုယျ့ဘာသာ ယုံကွညျမှုမရှိတဲ့ ယောကျြားတှပေါ။ အဲလို ယောကျြားတှကေ ခဈြဇာတျလမျးကို ပြျောစရာကနေ စိတျညဈစရာဖွဈအောငျ လုပျပဈနိုငျပါတယျ။
အမြိုးသမီးတှဟော ပှငျ့လငျးရဲရငျ့တဲ့ ယောကျြားမြိုးကို ကွိုကျပါတယျ။ သူမခဈြသူမှာ ဦးတညျခကျြ ရညျမှနျးခကျြ ရှိနရေငျ သူမတို့ စိတျသကျသာပါတယျ။ ပြော့ညံ့ညံ့ဆိုရငျတော့ နောကျတဈယောကျနောကျ ပါသှားမှာပါ။
အမြိုးသမီးတှကေ ပှငျ့လငျးရဲရငျ့တဲ့ ယောကျြားတှကေို ကွိုကျရတဲ့ အကွောငျး ၄ ခကျြ အောကျမှာ ပေးထားပါတယျ။ သငျ ပှငျ့လငျးရဲရငျ့ခငျြရငျတော့ အဲဒိအခကျြတှကေို လိုကျနာကွညျ့ပါ။
၁. ပှငျ့လငျးရဲရငျ့သူတှမှော စိတျဖိစီးမှု မရှိပါဘူး
ခဈြဇာတျလမျးဆိုတာ ပြျောစရာပဲ ဖွဈသငျ့ပါတယျ။ စိတျဖိစီးစရာ မဖွဈသငျ့ပါဘူး။ ပြော့ညံညံသူတှကေို ဒိတျလုပျရတာ ကွာလာတဲ့အမြှ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ စိတျဖိစီးမှုဟာ မွငျ့တကျလာပါတယျ။ ရဲရငျ့သူတှဟော သူတို့ရဲ့ခဈြသူကို လုံခွုံစိတျခစြပေါတယျ။ ခဈြခွငျးမှာ လြှို့ဝှကျတာ မရှိသငျ့ပါဘူး။ ရိုးရိုးသားသား ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးနဲ့ သငျ့ခဈြသူကို ခဈြပွလိုကျပါ။
၂. ပှငျ့လငျးရဲရငျ့သူတှမှော ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျစိတျ အရမျးမွငျ့ပါတယျ
ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျသူတှဟော ဆှဲဆောငျမှု အရမျးကောငျးပါတယျ။ ပှငျ့လငျးရဲရငျ့ဖို့အတှကျ ကိုယျ့ဘာသာ ယုံကွညျဖို့ လိုအပျပါတယျ။ အဲဒိ အခကျြနှဈခုကို အမြိုးသမီးတှေ အရမျး သဘောကပြါတယျ။ သဘာဝ ပီယဆေးတှပေါ။ အမြိုးသမီးတှေ လိုအပျတာက ဥစ်စာရှငှေေ မဟုတျပါဘူး။ ယုံကွညျခကျြ၊ အောငျမွငျမှု၊ ပှငျ့လငျးမှုနဲ့ ပြျောရှငျမှုတှပေါ။ ယုံကွညျမှု ပွငျးထနျတဲ့ ယောကျြားတဈယောကျဟာ သူခဈြတဲ့ အမြိုးသမီးအတှကျ အနာဂါတျအစီအစဉျတှေ ခထြားပါလိမျ့မယျ။
၃. ပှငျ့လငျးရဲရငျ့သူတှဟော အမြိုးသမီးတှရေဲ့ အခြိနျကို အလဟသ မဖွုနျးပါဘူး
ပှငျ့လငျးသူတှဟော တဈခေါကျ နှဈခေါကျ ခြိနျးတှအေ့ပွီးမှာ အခဈြကို ခံစားမလာရဘူးဆို ရိုးရိုးသားသား ပွောပွတတျပါတယျ။ ခဈြတယျဆိုရငျလဲ ခဈြကွောငျးကို ရဲရငျ့စှာ ပွောပွနိုငျပါတယျ။ ပြော့ညံသူတှကြေ ခဈြသလား မခဈြဘူးလား ကိုယျ့ဘာသာ ဝခှေဲမရပဲ ဝဝေဝေါးဝါးနဲ့ အခြိနျတှေ ဖွုနျးတီးတတျပါတယျ။ သငျ့မှာ အဆငျမပွတော တဈခုခုရှိနရေငျ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောတာကို အမြိုးသမီးတှေ ကွိုကျပါတယျ။ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးမရှိရငျတော့ သူတို့ကို တကယျကွိုကျတာ မဟုတျဖူးလို့ အမြိုးသမီးတှေ ထငျသှားကွပါလိမျ့မယျ။
၄. ပှငျ့လငျးရဲရငျ့သူတှဟော နှလုံးသားကို ခပြွတတျကွပါတယျ
သူတို့ဟာ အငွငျးခံရမှာစိုးလို့ မပွောရဲတာမြိုး၊ အဟားခံရမှာစိုးလို့ လနျ့ထှကျသှားတာမြိုး မရှိပါဘူး။ သူထငျတာ၊ သူခံစားရတာကို ရှငျးရှငျးလငျးလငျး ပွောပွနိုငျပါတယျ။ မိနျးကလေးတှေ စိတျဖိစီးရတာဟာ သူတို့အတှဲ ဘာခံစားနရေလဲဆိုတာ မမှနျးတတျလို့ပါ။ အဲဒါဟာ ပွသနာတှရေဲ့အစနဲ့ ခဈြဇာတျလမျးရဲ့အဆုံး ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ဆယျကြျောသကျတှကေတော့ လြှို့ဝှကျပွီး ရုပျရှငျဆနျတဲ့ အခဈြမြိုးကို စိတျကူးယဉျတတျကွမှာပါ။ အမြိုးသမီးတှမှောတော့ အဲဒါမြိုးအတှကျ အခြိနျမရှိတော့ပါဘူး။ တဈခုခုခံစားနရေရငျ ရငေုံနှုတျပိတျနမေယျ့အစား သူတို့ကို ပွောပွတာကို ပိုကွိုကျကွပါတယျ။
Previous: ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်အောင်မြင်ဖို့ နည်းလမ်းများ
Next: Facebook မှာ ဒါကိုဖတ်ပြီးမှ Like လုပ်ပါ။